Choose Faayilii - Maxxansaa
Kabala Waaltinaa Irratti cuqaasi
Galmeewwan barruuf durtii filannoowwan maxxansa LibreOffice qindeessuuf, Meeshaalee - Dirqaalee - LibreOffice Writer - Maxxansa fili.
Galmeewwan wardiif durtii filannoowwan maxxansa LibreOffice qindeessuuf, Meeshaalee - Dirqaalee - LibreOffice Calc - Maxxansi fili.
Badheeleen ta'annoo gucaa kan galmee barruu maxxansaman ifteessa.
Akka maqaa galmee baha maxxansaa keessatti dabalamu barbaaddu ifteessa.
Maxxansitoota teessuma baay'ee qabaniif, dirqaalli "Teessuma waraqaa qindaa'inoota maxxansaa irraa" akka teessumni qaraqaa fayyade qindaa'inoota sirnaatiin iftaa'e ifteessa.
akka fuulota yeroo maxxansaa dabalataan safaruu hin barbaanne ifteessa.
Akka waantota ala mudana maxxansaa ammee ta'an gad hir'isnu , akka waraqaa maxxansaa keessa jiru simu ifteessa.
Akka fuulotni gita daltuulamaan maxxansaman ifteessa. Yoo fuulonni yookiin islaayidonni waraqaa irra xiqqaatan, fuulonni yookiin islaayidonni baay'een fuula waraaqaa tokko irratti maxxansamu.
Dabalataanis qindaa'ina sagantaa maxxansaa spadminii fayyadamuu nidandeessa dirqaalawwan maxxansaa dabalataa ifteessuuf .